उनको नाइटी निकै पारदर्शी र मादक थियो - Nepali Sex Tube
उनको नाइटी निकै पारदर्शी र मादक थियो
‘मैले अघि गर्न नदिएकोले रीस उठयो ?’ उनले मेरो मुखबाट उनको मुख हटाउँदै अंगालो मार्दै सोधिन् । ‘उठेन । ठीकै नै त हो ।’ मैले भनें । ‘केही भईहाल्यो, भुँडी बढिहाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि त होइन ?’ उनले फेरि भनिन् । ‘त्योत हो ।’ ‘भोलि साधन किन्नु । अनि पुरै गरौंला नि त हुन्न ?’ उनले नै प्रस्ताव राखिन् । म दंग परें । म अघि बढ्नुपर्नेमा उनी नै अघि बडिरहेकी थिइन् ।
उनी नै मेरो कोठामा आएर सिरकमा घुस्रिएकी थिइन् । खासमा हामी अफिसदेखि कामको सिलसिलामा यहाँ आएका थियौं । कोठा फरक फरक लिएका थियौं ।
रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर आआफ्नो कोठामा पसेका थियौं । कोठामा पसेको आधा घण्टामा उनी नाईटीमा मेरो कोठामा आईन् । उनको नाइटी निकै पारदर्शी र मादक थियो । अगाडी तुना रहेको नाइटी तुना खुस्काउँदा सबै फुस्किने र करिव करिव उनले लाएको ब्रा र सानो पेन्टीको रंग समेत देखिने खालको थियो ।
केही बेरको गफपछि चिसो छ अई भन्दै मेरो कोठाको पलंगको सिरकमा घुस्रिइन् । एकैछिनमा गफ गर्दा गर्दै उनी त सुतिन् पो । कि सुतेको नाटक गरेकी थिइन् कि ? म झण्डै २० मिनेट के गरौं के गरौं भएको थियो ।
म पनि उनीसँग खाटमा सुतौं, के भन्ने हो ? नसुतौं, रातभरी जाग्राम हुने कि ? उनले भने नै जस्तो त चिसो भईसकेको थिएन । भदौको अन्तिम हप्ता चल्दै थियो ।
‘आ जे होस होस् …’ भनेर म पनि उनीसँग सिरकमा घुस्रिएँ । घुस्रिन अघि मैले हलुको प्रकारले सजिलै फुकाल्न मिल्ने हाफ पैन्ट र सेन्डो गञ्जीमात्रै लगाएँ । उनी कोल्टे अलिली खुट्टा खुम्च्याएर सुतेकी थिइन् । म उनको पछाडी पट्टि परें ।
मेरो पुरुषत्वलाई जाँच गर्नैका लागि त मेरो कोठाको मेरै खाटमा त्यो पनि त्यस्तो मादक देखिने नाईटी लाएर आएर सुतेकी होलिन् नि । म पनि कम हुनु हुन्न भनेर उनको हिपमा मेरो दुई तिघ्राले भेट्ने अर्थात ६६ पोजिसन बनाएर ढल्कें ।
एउटा हातले विस्तारै अंगालोमा कसें । उनले थाहा पाउने गरी उनको स्तनमा हात पुरयाएँ । इच्छा नहुने भए यत्तिमै उनले विरोध गर्लिन् लागेको थियो । तर कुनै प्रकारको विरोध भएन । ब्रा कसिलो रहेनछ । ब्रा भित्रै हात लगेर स्तन खेलाउन थालें । स्तनको टुप्पोलाई दुई औंलाले च्यापेर खेलाएँ ।
मलाई अब उनको ओंठमा किस गर्न, जिब्रो चुस्न र जिब्रोले नै खेलाउन मन लागिसकेको थियो । यौन सम्पर्कको अनुभव नभएपनि ट्रीपल x फिलीम हेरेर सबै जान्ने भईसकेको थिएँ । तर अनुभवमात्रै थिएन । ६६ पोजिसनले गर्दा अप्ठयारोपनि भईरहेको थिया ।
म पछाडी भएकोले नाईटी अलिक सारेर पछाडीबाट ब्राको हुक खोलिदिएँ । खुट्टातिरको नाईटीको तुना खोलिदिएँ । यसो गर्दा उनको पातलो नाईटी कम्मरमुनी पुरै नाङ्गो भएको थियो । पातलो सानो पेन्टी लाएकी रहिछ । पोर्न साइटहरु हेर्दा त्यस्तो पेन्टी लाएको देखेको थिएँ । सुति सुति पछाडीबाट उनको अगाडीतिरको पेन्टीमा हात लगें । पेन्टी बाहिर भएपनि मेरो हातले तातो महशुष गरयो ।
अब त व्युझिनुपर्ने हो । तर खोई अभियन गरेकी हो कि ? विस्तारै उनको पेन्टी बाहिरदेखि अलि अलि दबाब दिएँ । औंलाले दुई तिघ्राको विचमा रहेको पुतलीको दुईतिर चिरेकोमा हल्का दबाब दिएँ । यता मेरो कान्छो भाईपनि पुरै उत्तेजित भईसकेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, पहिलो पटक भएरहोला मेरो त कान्छो भाईले अण्डरवेयरभित्र चिसो हुने गरी पानी पनि चुहाएको महशुष भयो । मेरो कान्छो भाईले अब ६६ पोजिसनमा भएकोले उनको पिठयुँ र चाखमा घोच्न थालिसकेको थियो । अरु युवती जस्तै उनको बटक निकै ठूलो र सेक्सी थियो ।
अब के गरौं के गरौं भईरहेको थियो । अचानक उठेर पुरै होटेल हल्ला हुने गरी कराईदियो भने मेरो त विजोग हुन्छ । उनीसँगको सम्वन्ध त विग्रन्छ नै । आदी आदी सोच्दै मैले विस्तारै पल्टाएँ ।
उनी सरक्क पल्टिन् । अब उनी पुरै उत्तानो भईन । आँखा चाही चिम्म नै थियो । उनले कुनै वाधा विरोध नगरेकोले मलाई अघि वढ्ने थप हौसला मिलीरहेको थियो । अब म उनको पुरै माथिदेखि खेल्न थालें ।
उनको अगाडीतिरको नाइट गाउनको माथिल्लो तुनाहरुपनि खोलिदिएँ । अब उनी ब्रा र पेन्टी बाहेक पुरै नग्न भएकी थिइन् । ब्रालाई पनि माथि सारें । उनको सानो सानो आकर्षक स्तन खुल्ला भएको थियो । सधैं लुगाभित्र देखेको स्तन अब मैले पुरै नांगो देखिरहेको खेलिरहेको थिएँ । स्तनलाई माढ्न खेलाउन थालें । स्तनको टुप्पो निप्पल कडा भएको थियो । त्यसमाथि किस गरें । अनि स्तनको टुप्पो विस्तारै मुखमा लाएर हल्का चुसें । उनी अलिक चलमाईन । आँखामा हेरें । आँखा बन्द नै थियो । मैले मेरो भेष्ट खोलें । वास्तवमा उनले भनेजस्तो जाडो नै थिएन ।
त्यसमाथि अब म पुरै तातिईसकेको थिएँ ।
आँट गरेर उनको ओंठमाथि मेरो ओंठ लगें । मैले विस्तारै किस गरें । अनि विस्तारै पालैपालो माथिल्लो र तल्लो दुबै ओंठ चुसें । मेरो ओंठले उनको ओंठलाई खोल्यो । अब चाहीँ उनी उठ्छनी र गाली गर्छिन वा त्यसो गर्न दिँदिनन् भनेर कता कता डर पनि लागिरहेको थियो । उनी आफै मेरो कोठामा आएर खाटमा सुतेकीले गाली गर्दिनन् भन्ने पनि भित्रैदेखि मनले भन्यो ।
अब उनको तातो तातो स्वाश मैलेपनि महशुष गरें । मैले अझै आँट गरेर उनको जिब्रोमा मेरो जिब्रो खप्टयाएँ । अनि मेरो जिब्रोले विस्तारै उनको जिब्रो मुखभित्रै खेलाउन थालें । उनी चाहीँ पहिलो पटक भएर कि कुन्नी पुरै निस्कृय थिइन् । यस अघि किस पनि खाएको थिइनन् जस्तै लाग्यो । उनको भूमिका विना विरोध सुतिदिनुमात्रै थियो ।
यता मेरो कान्छो भाई असहय भईरेको थियो । उनको नाउँमात्रको नाइटीको सबै तुनाहरु खुस्किसकेकोले पातलो सानो पेन्टी र ब्रा बाहेक सबै जीउ नग्न भईसकेका थियो । त्यसैले मेरो कडा कान्छो भाईले उनको पेन्टीमाथि भएपनि राम्ररी नै स्पर्श गरिरहेको थियो । मेरो एउटा हात उनको पेन्टीमाथि सलबलाउन थाल्यो । उनको भुक्क उठेको नरमदार पुतलीले मलाई थप उत्तेजित बनायो । आखिर फिलिममा हेरेको बाहेक मेरो पनि प्रथम पटक नै थियो ।
मैले सजिलो हाफ पाइन्ट लाएको थिएँ । उनको जिब्रोमै मेरो जिब्रो लपक लपक खेलिरहेकै समय र एउटा हातले स्तन खेलाईरहेको समयमा अर्को हातले हाफ पाइन्टसँगै अण्डरवेयरपनि एकै पटक खोलें । मेरो हिनहिनाईरहेको उत्तेजित कान्छो भाईले उनको पातलो पेन्टीभित्रको पुतलीमा अबचाहीँ राम्ररी छुन पायो । मेरो कान्छो भाईले पुरै रयाल नै चुहाईरहेको थियो । उनको पेन्टीपनि भिजेको जस्तो लाग्यो । मेरो स्वतन्त्र कान्छो भाईले पातलो पेन्टी नै छेड्नेजस्तै घोच्दै हिनहिनाईरहेको थियो । पातलो पेन्टीले उनको भुक्क उठेको रोटीमा छिर्नमात्रै दिएको थिएन ।
मैले मेरो हात उनको पेन्टीभित्र छिराएँ । रौं निकै धेरै रहेछ । सायद छाट्दिनन् होला जस्तो लाग्यो । उनको पनि पुतली त पानी नै पानी भएको रहेछ । एकछिन औंला र हातले नै उनको दुई तिघ्रा विचको भुक्क उठेको पुतली खेलाएँ । कति नरम । कति मादक ।
उनी अहिलेसम्मपनि नबिउँझिएको अभिनय गरेपछि मैले विस्तारै पेन्टी तलतिर सारीदिएँ । यसपटक भने उनले पुरै प्रतिकृया जनाईन । सरक्क मलाई हल्का हटाएर अघिजस्तै कोल्टे परिन् । म थामिनसक्नुको भइसकेको थिएँ ।
मलाई हस्तमैथुन गर्दाको अनुभव थियो । अब मेरो कान्छो भाईबाट झर्नमात्र बाँकी थियो । तर पुरै खेलाउन दिएर पेन्टी खोल्नासाथ कोल्टे पो परिन् । उनलेपनि लिनसम्मको आनन्द लिईन् । नत्र उनको पुतलीबाट पेन्टी नै भिज्नेगरी पानी नआउनु पर्ने थियो । म त छक्क परें । अब उही ६६ पोजिसनमा आउनुप¥यो । तर यस पटक कम्मरमुनि उनी र म दुबै पुरै नाङ्गो थियौं । त्यसैले उनको पछाडीतिरबाट मेरो कान्छोभाईले राम्ररी नै स्पर्श गरिरहेको थियो ।
असह्य भएकोकोले उनको पछाडीदेखिपनि दुई खुट्टाविचमा मैले कान्छो भाईलाई छिराईदिए । अलि अलि हल्का त्यतिकै धक्का दिएँ । उनको पुतलीमा त होइन, त्यहीँ छेउछाउमात्रै मेरो कान्छो भाईले ठाउँ पाउँदापनि दंग परयो । अर्को हात पछाडीबाट भएपनि उनको स्तनमै थियो । म अब थामिनसक्नुको उत्तेजनामा आईसकेको थिएँ ।
यसरी केही छिनको धक्कापछि पछाडीतिरैबाट भएपनि उनको दुई खुट्टाविचको पुतलीको छेउछाउमा मेरो कान्छो भाईले तातो तातो बाक्लो सेतो बान्ता गरिदियो । हस्तमैथुन गर्दा यसरी नै कान्छो भाईले बान्ता गर्ने गरेको थियो । यो पटक चाहीँ ६६ पोजिसनमा कुनै युवतीको तिघ्रा विचमा बान्ता गरेको थियो ।
यसरी म सिथील भएँ । मेरो कान्छो भाईले छाडेको सेतो बाक्लो बान्ता उनको खुट्टा, तिघ्राको काप र तन्नामा पुरै लागेको थियो । त्यसलाई एकछिनपछि मेरो अण्डरवेयरले पुछें । पुछ्दा उनको तिघ्राको काप फेरि हेर्ने मौका मिल्यो । उफ कति साह्रो घना जंगल । कति बाक्लो रौं । पुछिसकेपछि पुःन हामी त्यसरी नै पुरै नांगो अवस्थामा ६६ पोजिसनमा सुत्यौं ।
म त झमक्क निदाएछु । म व्युँझदा उनी म तिर फर्केकी थिइन् । मलाई चुमेकि थिइन् र सोधेकी थिइन्, ‘मैले अघि गर्न नदिएकोले रीस उठयो ? ।’
अनि उनले भनेकी थिईन्, ‘भोलि साधन किनौं । अति जति गर्न मन लाग्छ, गरौं । जसरी गर्न मन लाग्छ गरौं । हुन्न ।’
मैले उत्तरमा पुःन अघिजस्तै मुखमा मुख गाडेर जिब्रो खेलाउँदै किस गरिदिएँ । फेरि कान्छो भाई उत्तेजित हुने संकेत पाएकोले धेरै चाहीँ गरिन । फेरि उत्तेजित भएपछि त्यसले बान्ता गर्नैपर्छ ।
तर मलाई कता कता उनलाई आगोमात्रै सल्केर अतृप्त भएको लाग्यो ।
उहाको आवाज सुनेर मा झन् जोड जोड ले पेलान थाले